Arintani Madaxdeena Ayaa Naga Qarisay. Waana Muhiim In Aan Ogaano. | Xaqiiqonews
Arintani Madaxdeena Ayaa Naga Qarisay. Waana Muhiim In Aan Ogaano.
“Maxey aheyd sababta reer Yurub U Gumeysteen Afrika! ?” runtii waa su,aal aas u a adag balse jawaabta oo gaaban waxa ay tahay “Kacaankii warshadaha”.
Muddo qarniyo Afrika iyo Yurub waxa ka dhaxeeyey ganacsi iyo isku socod balse ma jirin wax damac ah oo reer Yurub ay lahaayeen Afrika Ilaa La soo gaaray waqtigii “Kacaanka Warshadaha” waa xilliga gudaha qaaradda gabowday dhaxdeeda uu ka bilowday tartan Iqtiraac,ganacsi iyo siyaasadeed.
Maxaa Is Badalay Qarniga 19,aad ?
Waxaa soo kordhay si gooban waa “Warshadaha” waxaana reer Yurub ay u baahdeen Kheyraad cayrin ah si warshadaha u shaqeeyaan, waxayna ay ogaayeen Kheyraadka ka buuxo Afrika.
Sidoo kale reer Yurub waxa ay maskaxda ku haayeen raadinta “Suuq Weyn” oo loo beec geyo qalabka ay soo saaraan warshadaha bilowga ah, labadaas sabab oo isla xariira ayaa keenay in Afrika ay dhibane u naqato gumeysi xidid jar oo ugu dambeyn keenay dhaqan doorin.
Suuq Daacad ah
Afrika waxa ay guri u tahay wax ka badan 1 bilyan oo qof, tirada dadka cusub ee dhalanaya (Si ka duwan Yurub) waa mid sarreysa, sidaa darteed wadamada saxara ka hooseeya ee Afrika -Soomaaliyana ka mid tahay- waa goob cusub oo ay ku hardamayaan Yurub iyo shiinaha .
Dhamaan Qalabyada aan ku iibino suuqyadeena waxaa ka buuxa Wax soo saarka warshadahooda taasi oo ka dhigeysa Arin Wali taagan gumeysigii Yurub ee gudaha Afrika.